नेपालमा फेरि यो दिन देखा पर्दै सुर्य ग्रहण, कहाँ कहाँ देख्न सकिन्छ ? « The News Nepal
नेपालमा फेरि यो दिन देखा पर्दै सुर्य ग्रहण, कहाँ कहाँ देख्न सकिन्छ ?
काठमाडौं । नेपाल भारत लगायतका देशहरुमा अबको १ सय वर्ष पछि अर्को सुर्य ग्रहण देखा पर्नेछ । जुलाई २ मा पूर्ण सुर्य ग्रहण मात्र दक्षिण अमेरिका, प्रशान्त महासागर र दक्षिण मध्य अमेरिका र अर्जेन्टिनामा देखिनेछ । यो नेपालमा हेर्न सकिँदैन, किनकि यो राति १०ः४० बजे देखि सुरु भएर अर्को दिन बिहान ३ः३६ बजे समाप्त हुनेछ ।
नेपाल अनी भारतमा अर्को सुर्य ग्रहण ९५ वर्षपछि देखा पर्ने जनाइएको छ । अर्को सुर्य ग्रहण ३ जुन २११४ मा देखा पर्ने बताइएको छ । यो नेपालसँगै भारतको मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार र पश्चिम बंगालमा देख्न सकिनेछ । २० मार्च २०३४ अघि पनि यस क्षेत्रमा सुर्यग्रहण लाग्नेछ । तर यसलाई केवल भारतको कारगीलको पर्वतहरुमा हेर्न सकिनेछ ।
जब चन्द्र सूर्य र पृथ्वी बीचको हुन्छ तब सुर्यग्रहण हुन्छ । यसका चार आंशिक, बेलनाकार, पूर्ण र हाइब्रिड को प्रकार छन् । एक वर्षमा न्युनतम दुई र अधिकतम पाँच सुर्य ग्रहण लाग्न सक्छन् । डिसेम्बर २६, २०१९ मा, भारतको कोइंबाटोरे, मदुरैको उत्तर, तपाईं सुर्य ग्रहण देख्नुहुनेछ । यद्यपि, यो सुर्य ग्रहणको लागि लामो पर्खनुपर्छ । एजेन्सी